3 Colour Smart Radio Tecar Frequency RF Fanamafisana ny hoditra ST02
1.Fanafosafoana kofehy 2. fanamafisana ny hoditra 3. fanaintainan'ny fanaintainana
Shock Wave Therapy ultrasonlc Fanesorana ny hozatra
avy amin'ny admin tamin'ny 21-02-04
Ny fitsaboana ny onjampeo dia nanjary safidy fitsaboana mety ho an'ireo marary manana olana amin'ny tendon mitaiza. Ny fomba fanao dia mampiasa rivotra tsindry na tsindry elektromagnetika hanaterana onja mahazendana amin'ny vatana mba hanampiana amin'ny fikarakarana karazana aretina mitaiza, ao anatin'izany: Plantar fasciitis, Calcific tendo ...
Masinina fitomboan'ny volo 660nm hatsaran-tarehy fikolokoloana volo fitomboan'ny volo
Laser Hair Therapy dia fitsaboana tsy simika, tsy manafika izay ampiasaina matetika amin'ny fitsaboana ny fihenan'ny volo. (fitsaboana amin'ny laser ambany) dia entin'ny fitaovana iray misy takelaka laser izay mamirapiratra amin'ny hodi-doha. Izy io dia rafitra fitsaboana volo amin'ny laser avo lenta, miorina amin'ny ambany 660nm ...
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2021, Zohonice dia namoaka ny maodely Big Beauty hot-elling Beauty Equipment. Anisan'izany ny masinina anti-ging tarehy 4DHIFU Ultra / Fractional CO2 Laser, ny mason-koditra amin'ny mason-koditra manadio lalina -Oxge Hydro, Fanesorana ny fikorontanan'ny tatoazy Professional Q-Switch ND YAG l ...